Eo amin'ny sehatra amin'ny hoavy tsy ho ela dia tokony hamoaka "melodrama" mandresy miaraka amin'ilay mpilalao sarimihetsika malaza Britanika Kate Winslet. Ny mpiara-miasa aminy dia Idris Elba, izay tsaroan'ny mpijery ny tetikasa "Bezarodnye biby".
Ny sezan'ny talen'ny tale dia nomena an'i Hani Abu-Assad. Nanjary nalaza izy ho an'ilay sarimihetsika "Paradise Now" momba ny mpampihorohoro ao Gaza. Noho ny fototry ny soratra dia nalaina ilay tantara an-tsehatra nataon'i Charles Martin "Between us mountains".
Kate Winslet vs. fifandonana tafahoatra eo amin'ny karipetra mena
22 sarin'ny ankizy, izay tsy hahafantaranao ireo kintana tsy misy fanazavana an-tsika!
Iza moa i Kate tsara tarehy afaka manamboatra vato? Ny iray dia tsy maintsy mahatsiaro ny anjara asany ao amin'ny Titanic, The Reader sy The Country Magic (...) amin'ity fotoana ity Ramatoa Winslet dia tsy maintsy maneho ny hafaliana amin'ny olon-tsy fantatra aorian'ny fianjeran'ny fiaramanidina.
Araka ny filazan'ny sary, ireo mpilalao britanika dia milalao mpivady tsy fantatra, izay niaina tamim-pahagagana tamin'ny alàlan'ny ala. Ny vadin'I Kate dia ny ampakarin'ny lehilahy hafa, fa eo anelanelany sy amin'ny mpandidy iray manan-talenta, dia mitebiteby ny filana.
Angelina Jolie sy Brad Pitt indray miverina?
Nicole Scherzinger sy Grigor Dimitrov
Justin Bieber nisotro ronono avy Instagram
Ilay jiolahy dia nandratra ny mpiambina an'i Miranda Kerr tamin'ny antsy
Kim Kardashian dia nizara tamin'ny mpankafy ny fomba nankalazany ny faha-37 taonany
Fiambenana dimy: "Anjely" Victoria's Secret ny anjara asan'ny mpilalao baolina kitra amerikana
Vanessa Parady dia nandeha niaraka tamin'ny sipa vaovao
Na dia teo aza ny tsaho momba ny fizarana an'i Gerard Piquet sy Shakira dia mandany fotoana miaraka amin'ny zanany ao Barcelona
Ny Star ny horonan-tsary "Spy Kids" Daryl Sabara dia nanao tolotra ho an'ny mpihira Megan Traynor
Courtney Cox dia nanangona ny namany tamin'ny ankizivavy ROCK4EB.
Natalia Vodyanova dia nizara ny tambajotra sosialiny tamin'ny sarin'i Antoine Arnaud sy ny zanany Maxim
Ny lehilahy dia misotro izay tokony hatao - toro-hevitra amin'ny psikology
Endrika kalorika amin'ny fructose
Amin'ny ankapobeny miaraka amin'ny shorts
Manicure miaraka amin'ny gilasy - fanorenana tany am-piandohana ho an'ny porofo mafana
Ny orona maina
Nolazain'i Mom Cristiano Ronaldo fa manantena zaza iray avy amin'ny zanany i Georgina Rodriguez
Impiry impiry moa ny alika?
Karazan'akoho tapakila hisafidy efitrano iray?
Karazana voankazo voajanahary - orana sy mandarina
Palais de Arabia Saodita
Ny valindry no tsara kokoa ho an'ny trano fidiovana?